Samsung Galaxy M10s na -aga n'aka Geekbench | Androidsis
Samsung Galaxy M10s gafere n'aka Geekbench na Exynos 7885
Samsung nwere atụmatụ iji gbasaa ezinụlọ Galaxy M nke smartphones na obere oge, nakwa dị ka nwere n'uche nke ukwu mụbaa ọnụ ọgụgụ nke Galaxy A ngwaọrụ n'oge na-adịghị anya.
Geekbench enyela anyị ihe ngosi ọhụrụ banyere otu njedebe na-esote nke usoro a kpọtụrụ aha mbụ, na mba, ka anyị ghara ikwu banyere ya. M30s Galaxy, ma M10s Galaxy. Nke a ga - adịtụ mma nke Galaxy M10 mbụ malitere na Jenụwarị nke afọ a, ma ugbu a, anyị nwere ụfọdụ data sitere n'aka ya nke na-egosi ụfọdụ njirimara ya na nkọwapụta ọrụaka ekele maka akara ngosi.
Ekwentị mkpanaka ọhụrụ pụtara na nchekwa data nke usoro nyocha a ma ama bụ 'samsung SM-107F'. Agbanyeghị na akara ngosi ahụ adabaghị na aha azụmaahịa ọ ga - enwe nke ga - abụ 'Galaxy M10s-, ihe niile na - egosi na ọ bụ otu ụdị a. Factorylọ ọrụ na-atụnye aro na-egosi nke a, na ihe gbasara nke puru imezu bụ nke dị elu, ebe anyị hụrụ SoC nke ọ kwadebere, nke bụ Exynos 7885, dị elu karịa Exynos 7880 nke Galaxy M10, dịka ọmụmaatụ.
Ndepụta nke Samsung Galaxy M10s chere
Ndepụta Geekbench na-ekpughekwa nke ahụ smartphone nwere ebe nchekwa RAM nke ikike 3 GB, yana nkọwa na ọ na-agba ọsọ sistemụ arụmọrụ Android, nke a ga-ahaziri n'okpuru oyi akwa Samsung's One UI.
Samsung amalitela imepụta Galaxy M30s: mbido ya ga-eme n'August
Buru n'uche na Galaxy M10 malitere na mmalite nke afọ nwere ihuenyo TFT 6.22 inch na HD + mkpebi nke pikselụ 1,520 x 720, aha a na-akpọbu Exynos 7880 dị ka SoC, ebe nchekwa 2/3 GB, oghere nke nchekwa 16/32 GB na batrị 3,430 mAh. Site na àgwà ndị a niile, anyị nwere ike iche na Galaxy M10s ga-enwe njirimara na nkọwa ka mma, ọ bụ ezie na ha agaghị ewepụ onwe ha dị anya site na ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy M10s gafere n'aka Geekbench na Exynos 7885
Samsung nwetara ọnụnọ n'ahịa a na-eyighị eyi
Ebubo Xiaomi Mi A3 Pro pụtara na ọ kwadoro: ọ ga-amalite n'oge na-adịghị anya